Wenger Oo Ka Baryay Taageerayaasha Arsenal Inay Ixtiraamaan Van Persie Kulanka Sabtida Ee Old Trafford. - jornalizem
Wenger Oo Ka Baryay Taageerayaasha Arsenal Inay Ixtiraamaan Van Persie Kulanka Sabtida Ee Old Trafford.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa ugu baaqay taageerayaasha kooxda inay u la dhaqmaan ciyaaryahankoodii hore Robin van Persie ixtiraamka uu mudan yahay marka Gunners ay Old Trafford sabtida kula kulanto Manchester United.
Kulankaan ayaa ah fursadii ugu horeysay ee ciyaaryahanka reer Holland uu kaga horyimaado kooxdiisii hore, waxaana tababaraha Faransiiska ah uu ugu baaqay taageerayaasha u safraya Old Trafford inay soo dhaweyn fiican siiyaan Van Persie.
“Waxaan rajeynayaa inay noqon doonto soo dhaweyn ixtiraam leh sababtoo ah waxa uu inoo ciyaaray muddo sideed sanno ah, shaqo fiican ayuuna inoo soo qabtay. Waxaadna dooneysaa in la ixtiraamo.” ayuu Wenger u sheegay suxufiyiinta.
“Waxaan u olaleynaa ka hortaga faquuqa. Isbuucii hore sidaas ayay aheyd sidaasi darteed maxaa diidaya inaan sidaas oo kale sameyno isbuucaan?
“Ma aqaano waxa ay taageerayaasha sameyn doonaan, waxaanse qabaa inuu heli doono soo dhaweynta aan rajeynayo.”
29 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa sideed sanno u soo ciyaaray Arsenal ka hor inta uusan Manchester United u wareegin bishii August.